kalyanamitta – Dhammadīpa
Tag Archives: kalyanamitta
Posted on3Jun 2017 by Ashin Sopāka
“Cultivateafriend whose ways are seven. What seven? He gives what is hard to give, does what is hard to do, bear what is hard to bear, he confesses his secrets and keeps your secrets, in times of trouble he does not abandon you, and he does not despise you when you are down.” – AN 7.36
“Sattahi, bhikkhave, aṅgehi samannāgato mitto sevitabbo. Katamehi sattahi? Duddadaṁ dadāti, dukkaraṁ karoti, dukkhamaṁ khamati, guyhamassa āvi karoti, guyhamassa
pariguhati, āpadāsu na jahati, khīṇena nātimaññati.”
“ရဟန်းတို့ အင်္ဂါခုနစ်မျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော အဆွေခင်ပွန်းကို မှီဝဲအပ်၏၊ အဘယ်ခုနစ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ — (သူတစ်ပါးတို့) ပေးနိုင်ခဲသော အရာဝတ္ထုကို ပေးတတ်၏၊ ပြုနိုင်ခဲသော အမှုကို ပြု၏၊ သည်းခံနိုင်ခဲသော အရာကို သည်းခံ၏၊ မိမိ၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော အရာကို ထိုအဆွေခင်ပွန်းအား ထင်စွာပြု၏၊ ထိုအဆွေခင်ပွန်း၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော အရာကို လျှို့ဝှက်၏၊ ဘေးရန်တို့ကြောင့် မစွန့်ပစ်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ခြင်းကြောင့် မထီမဲ့မြင် မပြု။”
“Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy? Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận.”
Top: Lineated Barbet
Bottom: Brown Throated Sunbird
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, friend, kalyanamitta